Sida loo helo meheraddaada iyada oo loo marayo xiisad ka dhaxaysa Semalt?
Waqtigii lagu jiray horumarka aan la qiyaasi karin ee internetka iyo saameyntiisa sii kordheysa, jiritaanka ganacsi qiimo leh iyo ganacsi guuleysanaya waa mid aan lagaranaynin iyadoo aan la abuurin degelkaaga. Si kastaba ha noqotee, goob ma aha in la abuuro oo keliya laakiin waa inay si sax ah u shaqeysaa oo ay si fudud u ogaan karaan macaamiisha iyo tartamayaasha iyada oo loo marayo biraawsarka. SEO ee websaydhadu waxay kuu oggolaan doonaan inaad shirkaddaada ka saarto xiisad isla markaana aad soo jiidato saldhig macaamiil cusub.
Suuqa raadinta awoodda ayaa daruuri ka ah SEO gudaha ah, kobcinta kheyraadka dibedda, iyo SERM, taasoo micnaheedu yahay la shaqeynta sumcadda shirkadda ee internetka. Qabashada hawlgallada kor ku xusan waxay gacan ka geysan doontaa soo jiidashada macaamiisha, shaqaalaha, ama la-hawlgalayaasha; in la wanaajiyo sumcadda shirkadeed ee natiijooyinka raadinta; kordhinta tirada amarada alaabada ama adeegyada; kordhinta aaminaadda dhagaystayaasha bartilmaameedka; hubso gaarista sumadda ugu badan.
Sidaas darteed, mareegtu kaliya maaheynayso taraafikada laakiin waxay kaloo bilaabeysaa inay sifiican ula shaqeyso booqdeyaasha.
Adeegsade, markii ugu horreysay ee uu wajaho kor u qaadista SEO-ga ee bogagga, way adag tahay in laga dhex xusho fursado badan oo SEO ah oo la bixiyo. Haddii malaayiin ilaha internetka ee tartamaya ay ka horjoogsadaan boggagaaga inuu helo darajo sare Google, haddii taraafikada goobta ay wali hooseeyso, in kasta oo ay jiraan tiro ku filan oo macaamiisha suurtagalka ah, Semalt waxay u kicin doontaa ganacsigaaga heerka xiga.
U soo hel Semalt sidii suuq geyn xirfadeed iyo adeegga Mashiinka Mashiinka Raadinta, kaas oo noqon doona mid ka mid ah aaladaha ugu waxtarka badan ee lagu kobcinayo ilahaaga internetka. Nidaamka xayeysiinta ee ay adeegsato shirkaddeenu waa mid guud oo ku habboon dhammaan noocyada ganacsiyada khadka tooska ah. Kordhinta mashiinka raadinta Semalt wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameyso qulqulka joogtada ah ee isticmaaleyaasha internetka ee la beegsaday goobta. Tani waa sababta oo ah horumarka lagu gaari karo tayeynta ma baaba'aan, sidaa darteedna goobta ayaa sii wadi doonta helitaanka taraafikada xitaa ka dib joojinta dhammaystiran ee shaqada SEO ee la qabtay.
Semalt wuxuu kaa caawin doonaa inaad ogaato isha ugu weyn ee taraafikada laga helo internetka. Maaddaama ugu yaraan kala bar booqdayaasha goobta ay ka yimaadaan matoorada raadinta.
Thanks to Semalt, waxaad soo jiidan doontaa booqdayaasha xiiseynaya, kuwaas oo ka yimaada websaydhka mashiinka raadinta si ay kuu baaraan, adeegyadaaga, alaabadaada, ama macluumaadka.
Waxaa kale oo habboon in la tixgeliyo in taraafikada raadinta ay bilaash tahay! Uma baahnid inaad bixiso kharashka dhajinta ama isku xirka boggaaga bogga natiijooyinka raadinta.
Haddii aad ka walwalsan tahay si aad u sameyso kobcinta kheyraadka tayada leh, koox khubaro ah oo dhan iyo in ka badan hal bil oo shaqo ayaa loo baahan yahay, waxaan baabi'in doonnaa shakigaaga. Khubaradeenna ayaa maskaxda ku hayn doona waxa aad rabto iyo sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah shaqada. Intaa waxaa sii dheer, baahida loo qabo in si joogto ah loo cusbooneysiyo xogta barta iyo loo kordhiyo culayska isku xirka ayaa sidoo kale la tixgeliyaa.
Loogu talagalay adeegsadayaasha shirkaddoodu aysan si madax-bannaan u go'aansan karin howsha suuqgeynta raadinta ee ku saleysan istiraatiijiyaddooda suuq geynta adduunka, Semalt wuxuu ka caawin doonaa xulashada aagagga mudnaanta. Tani waxay diiradda saari doontaa dadaalka khabiirada SEO-ku takhasusay iyo suuqleyaasha hal how oo ay gaaraan waxtarka ugu badan.
Semalt wuxuu kaa caawin doonaa:
Aynu u sii gudubno falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan howlaha aad ka heli karto Semalt.
Adigoo diirada saaraya inaad abuurto tayo sare dhammaan shabakadaha quseeya, waxaad waayi kartaa waxtarka dhabta ah ee uu leeyahay. Kuwa bilowga ah ee qaybta kobcinta raadinta, waxaan bilaabeynaa olole AutoSEO ah, kaasoo muujinaya natiijooyin aad u wanaagsan waqti gaaban.
Waxaad u adeegsan kartaa howshan inaad ku hormariso mashruucyadaada ama aad horumariso adeegga macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, iyada oo aan loo eegin doorbidista shaqsiyadeed ee macaamiisha, AutoSEO waxay bixisaa kobcinta bog tayo sare leh. Iyada oo ku saleysan cilmi baarista ereyga muhiimka ah iyo warbixinnada falanqaynta shabakadda, ololahan wuxuu kaa caawin doonaa inaad sare u qaaddo aragtida websaydhka iyo inaad dhisto xiriirro.
Isla mar ahaantaana, waa shaqada leh ereyada muhiimka ah ee muhiimka u ah SEO. Qorshaynta ereyga furaha ayaa kaa caawin doona inaad xulato jumladaha saxda ah, kuwaas oo ugu fiican goobtaada.
Bandhiggu wuxuu si gaar ah faa'iido ugu yeelan doonaa milkiileyaasha websaydhada, kuwa madaxa-bannaan, milkiilayaasha ganacsiga yar yar, iyo bilawga.
Miyaad si cad u qeexday waxyaabaha aad mudnaanta siineyso oo aad ugu talagashay kobaca iibka, faa iidada, iyo iskaashiga waxtarka leh? Markaa FullSEO adiga ayaa kuu habboon. Waxaa ka mid ah horumarinta iyo hirgelinta qorshaha macaamil-u gaar ah SEO iyo kor u qaadista Shabakadda. Feejignaanta faahfaahinta iyo fahamka sida gaarka ah ee ilaha macaamiisha ayaa kuu oggolaaneysa inaad horumariso istaraatiijiyada xayeysiinta ee ugu waxtarka badan ee websaydhka.
Aad xiiseyneyso adeegyadaada ama macaamiishaada badeecada macaamiisha ayaa dhab ahaan loo tilmaami doonaa goobtaada, taas, oo iyana, aad ugu dhowaan doonta meesha ugu sareysa mashiinka raadinta.
Hawlaha ugu waaweyn ee ololahan ayaa ah:
isku xirka dhismaha,
sixitaanka barta goobta,
FullSEO waxay wax ku ool u tahay anshaxa ganacsiga iyo ganacsiga elektiroonigga ah. Si kastaba ha noqotee, diiradda saarista macmiil gaar ah ayaa ololahan ka dhigaya mid faa'iido u leh bilaabista, ganacsatada gaarka ah ee raba inay u isticmaalaan boggooda intarnetka ugu badan.
Ma jiro qof jecel inuu sharaxo faahfaahin dheer oo adag oo ku saabsan badeecada, adeegyada, shirkadaha. Kaliya u muuji macaamiishaada waxaad sameyn karto adigoo adeegsanaya fiidiyaha Faahfaahin ee ay abuureen xirfadyahannada Semalt. Keliya ku qeex fikirkaaga ereyo kooban, waxaanan kaa caawin doonaa inaad abuurto filim-muusig oo ka tarjumaya habka wax soo saarka, mabaadi'da shirkaddu waxay metelaysaa tayada adeegyada aad bixiso iyo sheyga aad soo saarto. U gudbinta macluumaadka qaab warbaahinta ah ayaa si weyn u fududayn doonta aragtideeda isla markaana macaamiisha ka dhigaysa inay la wadaagaan waxa ay u arkaan dadka kale.
Kooxda Semalt waxay qaadan doonaan horumarinta fikradda, qorista qoraalka, la socoshada wax soo saarka fiidiyowga, ku-shaqaynta xirfadda, iyo tafatirka.
Adeeggan wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay milkiileyaasha ganacsiyada yaryar, shirkadaha bilowga ah, iyo shirkadaha doonaya inay daneeyaan dhagaystayaasha bartilmaamedka ah mashruucooda.
Daraasad hordhac ah oo xog iyo macluumaad ah ayaa fure u ah guusha ganacsi kaste. Imtixaan ayey u baahan yihiin macaamiisha waxaadna siisaa sida saxda ah ee ay doonayaan. La soco horumarka iyo waxqabadka shirkadda iska soo horjeedda, go'aaminta sirta guushiisa, oo hirgeli baaritaannada la helay. Falanqaynta Shabakadayada ayaa ku ogeysiin doonta waxwalba oo ku saabsan shaqada iyo waxtarka boggaaga.
Nidaamku wuxuu bixin doonaa:
adeegyada hubinta qiimeynta kheyraadkaaga internetka,
sahaminta websaydhyada iska soo horjeeda,
garashada khaladaadka kobcinta bogga,
helitaanka warbixinno dhan darajo websaydh ah
kordhinta aragtida websaydhka ee websaydhka.
Isticmaale kasta wuxuu sameyn karaa wax wanaagsan oo ka mid ah falanqaynta bogga maxaa yeelay aqoontu waa aaladda ugu awoodda badan gacmahaaga.
Haddii abuurista degelku ay umuuqato wax aan ka yaraynin xayeysiinteeda, Semalt wuxuu ka caawin doonaa hawshan! Annagoo ah aqoonyahanno ku xeel dheer cilmigayaga, waxaan abuuri doonnaa degel kugu habboon adiga. Haddii ay tahay dukaan internetka ah, istuudiyaha farshaxanka ee gaarka loo leeyahay, shirkad weyn, ama shirkad gaar ah - khabiirradaada ayaa abuuri doona badeecada ugu wanaagsan ee buuxisa dhammaan baahiyaha iyo rabitaanka macmiilka.
Hanuuninta qadka internetka maanta ayaa u rogaya bog websaydh kaadhka ganacsiga, wejigiisa. Taasi waa sababta ay muhiimka u tahay in aan diiradda la saarin oo kaliya kobcinta mashiinka raadinta ee ilaha internetka laakiin sidoo kale abuurista bog ku habboon qaab ahaan. Waxaan sidoo kale ilaalinaynaa heerar sare oo amniga xogta ah inta lagu gudajiray horumarinta a site. Ka dib bilowga shaqadeeda, macluumaadka si joogto ah ayaa loo ururinayaa, loo baarayaa, laguna soo saari doonaa qaab warbixino. Markaa, waad xakameyn kartaa hawlgalka kheyraadkaaga bilowgi hore.
Naqshadeyn iyo naqshad wacan, taageero joogto ah iyo casriyeyn, is-dhexgal bulsheed aan dhameystirneyn oo laxiriira bucshiradaha iyo API-yada, xaqiijinta xallinta cms - waxaas oo dhan waxaa sameyn doona Semalt.
Websaydhka kobcinta SEO
Marxaladda koowaad ee shaqada ku saabsan kor u qaadista websaydhka, waxaad ubaahan doontaa taageerada khabiirada khibrada leh. Waxaan u adeegsan doonnaa xirfadaheena, sidii aan ku kasbaday sanado badan oo ah nashaad firfircoon, si aan kuugu hagno hormarinta bartaada. Xirmooyin buuxa oo adeegyo ah oo lagu falanqeeyo astaamaha bogga hadda jira iyo isbeddelada internetka, ka eegidda dhibaatooyinka iyo xallinta, dejinta iyo saxda bog deg deg ah ayaa runtii ah waxaad u baahan tahay oo annaga ayaad naga heli doontaa.
Koox khubaro hibo u leh ayaa diyaar u ah iskaashi 24 saac maalintii, 365 maalmood sanadkii. Shaqaalaheenu waxay ka kooban yihiin daraasiin khubaro aqoon u leh oo ku hadla Ingiriis, Jarmal, Faransiis, Isbaanish, iyo Turki. Sidaas ayaad ula xiriiri kartaa qoraayaasha-qorayaasha, barnaamij-yaqaannada, hal-abuurayaasha nuxurka, horumarinnada bogagga ama xitaa hoggaaminta shirkadda, waxaad hubin kartaa in la fahmay oo aad awood u yeelan kartaan inaad baanka ka siisaan talooyinka arrimaha;
In ka badan toban sano, kooxdayada isku-dhafka ah waxay ka soo uruurisay khubaro karti leh, firfircoon, iyo dhiirrigelin kuwaas oo hirgeliyay mashaariic badan oo guulo leh. Sannado fara badan oo isdaba joog ah iyo uruurinta khibradaha ayaa u oggolaaday khubaradeena inay soo xiraan xirfadaha isla markaana horumariyaan nidaam u gaar ah kobcinta kheyraadka shabakadda.
In kabadan 800,000 mashruuc ayaa guuleysta, 300,000 adeegsadeena wey ku qanacsan yihiin tayada shaqadayada;
Sawirka guud ee mashaariicda la dhammaystiray ayaa tilmaan u ah guusha Semalt ee hirgelinta fikradeeda, iyo dib u eegista macaamiisha qanacsan ayaa xaqiijinaya waxtarka nidaamka.
Nidaam dabacsan oo qiimo jaban iyo dalabyo soo jiidasho leh oo joogto ah; saamiga qiimaha ugu wanaagsan. Waxaad xor u tahay inaad doorato howlaha aad doorbideyso adigu adoo ku saleynaya dhaqaalahaaga iyo jihada aad higsaneyso. Waxaan bixinaa nidaam ku habboon qiimo dhimista iyo dalabyo faa'iido leh macaamiisha caadiga ah. Kaliya $ 0.99, waxaad isku dayi kartaa labada toddobaad ee ah AutoSeo Trial oo aad arki kartaa astaamaha adiga kuugu xiiso badan. Xaaladdan oo kale, iyadoo aan loo eegin inaad dooratay AutoSeo, FullSEO ama falanqayn, saddex-bilood, lix-bilood, iyo baakadaha sannadlaha ah waxay kuu keenayaan faa'iido 10, 15, iyo 25%, siday u kala horreeyaan.
Sababta loo booqdo bartayada internetka
Bartayada, waxaad ku baran kartaa naftaada mabaadi'da Semalt iyo dib u eegista macaamiisha si aad u fahamto ma aha oo kaliya waxyaabaha gaarka ah ee SEO laakiin sidoo kale astaamaha qaab dhismeedka websaydhka ayaa looga jeedaa. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan adeegyada la bixiyo iyo qiimahooda websaydhka rasmiga ah ee Semalt. Haddii mawduuc kasta kuu xalliyo adiga, weydii su'aal kooxdayada taageerada.